Baro Xaquuqdaada | CareerForce
Aqoonso waxaa aad khaladay iyo waxa aad kaqaban karto
Waxaa jiro sharciyo badan oo loogu talagalay inay kaadifaacaan in si khaldan laguula dhaqmo goobta shaqada. Waa muhiim inaad barato xaquuqdaan iyo inaad fahanto waxa batrooniyaashu samayn karaan iyo waxa aysan samayn karin. Waxaan doonayaa inaan dulmar kusamayno xaquqdaada iyo difaacyadaada. Waxaan doonaynaa inaad ogaato cidda aad laxariirayso haddii aad dareemayso in lagu takooray. CareerForce mabixiso talooyin sharci oo laxariira xaquuqda goobta shaqada, laakiin waxaan kaacaawin karnaa inaad barato aasasiyada anagoo kusiinayna:
Fahanka xaquuqaha guud ee kajira goobta shaqada
Talaabooyinka xigga ee gudbinta cabasho adii aad dareento in lagu takooray
Macluumaad kusaabsan caawimaadaha macquulka ah